Nhau - How Low-e Girazi Rinoshanda
Girazi ndechimwe chezvinhu zvinozivikanwa uye zvakaomarara zvekuvakisa zvinoshandiswa nhasi, nekuda kwechimwe chikamu kune ayo anogara achivandudza kwezuva uye kupisa kwemahara. Imwe nzira iyo kuita uku kunoitwa kuri kuburikidza nekushandisa kwekungoita uye kwezuva kudzora yakaderera-e kupfeka. Saka, chii chakadzika-e girazi? Muchikamu chino, tinokupa iwe zvakadzama kutarisisa kwekufuka.
Kuti unzwisise kupfeka, zvakakosha kuti unzwisise simba remagetsi ezuva kana simba kubva kuzuva. Ultraviolet (UV) mwenje, mwenje unooneka uye infrared (IR) mwenje zvese zvinotora zvikamu zvakasiyana zvezuva rezuva - mutsauko uripo pakati pevatatu unotsanangurwa newavolengths avo.
• Ultraviolet mwenje, zvinova izvo zvinoita kuti zvinhu zvemukati zvakaita semachira uye zvekuvhara madziro zvinyangarika, zvine wavelengths ye310-380 nanometer kana uchirondedzera mashandiro egirazi.
• Chiedza chinoonekwa chinotora chikamu cheiyo spectrum pakati pevelengths kubva panenge mazana matatu nemakumi masere neshanu emanamara
• Infrared mwenje (kana kupisa simba) inopfuudzwa sekupisa kupinda muchivako, uye inotanga pawavelengths e780 nanometer. Solar infrared inowanzo kunzi ipfupi-wave infrared simba, nepo kupisa kuchipisa kubva kune zvinodziya zvinhu kune akakwirira mavelengths kupfuura zuva uye anonzi serefu-wave infrared.
Yakaderera-E machira akagadzirwa kuti aderedze huwandu hweiyo ultraviolet uye infrared mwenje iyo inogona kupfuura nepagirazi pasina kukanganisa huwandu hwechiedza chinoonekwa chinopfuudzwa.
Kana kupisa kana mwenje wesimba ukabatwa negirazi, inogona kusudurwa nekufamba nemhepo kana kupenyeredzwa negirazi pamusoro. Iko kugona kwechinhu kupenya simba kunozivikanwa sekusaita basa. Kazhinji, zvinhu zvinoratidzira zvakanyanya zvine hushoma emissivity uye zvisvinu zvakasviba zvine mavara zvine emissivity yakakwira. Zvese zvinhu, zvinosanganisira windows, zvinopisa kupisa muchimiro cherefu-wave, infrared simba zvichienderana nekumisikidza uye tembiricha yenzvimbo yavo. Radiant simba ndeimwe yenzira dzakakosha kupisa kupisa kunoitika nema windows. Kuderedza kusasununguka kweimwe kana anopfuura emawindo egirazi ewindo anovandudza mawindo ekudzivirira ewindo. Semuenzaniso, isina kugadzirwa girazi ine emissivity ye .84, nepo Vitro Architectural Glass '(yaimbova PPG girazi) kutonga kwezuva Solarban® 70XL girazi rine emissivity ye .02.
Apa ndipo panomira pasi emissivity (kana yakaderera-e girazi) zvipfeko zvinopinda mukutamba. Girazi rakadzika-E rine microscopic yakatetepa, inoratidzira - ine hutete hwakanyanya kupfuura bvudzi remunhu - inoratidza simba remhepo-refu (kana kupisa). Dzimwe dzakaderera-e's zvakare dzinoratidza huwandu hwakakura hwediki-wave rezuva infrared simba. Kana mukati mekupisa simba richiedza kutizira kune rinotonhora kunze panguva yechando, iyo yakaderera-e inoratidzira inoratidza kupisa kumashure mukati, ichideredza kupenya kwekupisa kupisa kuburikidza negirazi. Izvo zvinoitika zvinoitika munguva yezhizha. Kuti ushandise fananidzo yakapusa, yakaderera-e girazi rinoshanda zvakafanana neiyo thermos. Iyo thermos ine lining yesirivheri, iyo inoratidza tembiricha yechinwiwa chirimo. Iyo tembiricha inochengetwa nekuda kwekuratidzira kunogara kuripo kunoitika, pamwe nekubatsirikana mabhenefiti ayo nzvimbo yemhepo inopa pakati pemukati mekunze matemba eiyo thermos, yakafanana neyakavharidzira girazi unit. Sezvo yakaderera-e girazi rine matete akatetepa zvakanyanya esirivheri kana zvimwe zvakaderera emissivity zvinhu, iyo dzidziso imwechete inoshanda. Sirivheri yakaderera-e inoratidzira inoratidza tembiricha yemukati kumashure mukati, ichichengeta imba ichidziya kana kutonhora.
Yakaderera-e Kupfeka Mhando & Maitiro Ekugadzira
Iko kune chaiko mhando mbiri dzakasiyana dzeapasi-e kupfeka: pasiti yakaderera-e kupfeka uye yezuva kudzora yakaderera-e kupfeka. Passive yakaderera-e zvipfeko zvakagadzirirwa kuwedzera kupisa kwezuva mukati memba kana chivakwa kuumba mhedzisiro ye "passive" kudziyisa uye kudzikisira kuvimba pakuita kwekupisa. Solar control yakaderera-e kupfeka kwakagadzirirwa kudzikamisa huwandu hwekupisa kwezuva kunopinda mumba kana chivakwa nechinangwa chekuchengetedza zvivakwa zvinotonhorera uye kudzikisa kushandiswa kwesimba zvine chekuita nemhepo inodzora.
Ese maviri marudzi egasi-e girazi, kungotarisa uye kutonga kwezuva, zvinogadzirwa nenzira mbiri dzekugadzira - pyrolytic, kana "hard coat", uye Magnetron Sputter Vacuum Deposition (MSVD), kana "soft coat". Mune pyrolytic maitiro, ayo akazove akajairika mukutanga kwema1970, iyo yekumatira inoiswa kune iro girazi ribhoni apo iri kugadzirwa pane yekuyangarara mutsara. Iko kupfeka kunozo "fuse" kune inopisa girazi pamusoro, ichigadzira chisungo chakasimba chinogara kwazvo mukugadzirisa girazi panguva yekugadzira. Chekupedzisira, girazi rinochekwa mumashizha emasheya emhando dzakasiyana kuti atumirwe kune vanogadzira. Mune iyo MSVD maitiro, akaunzwa muma1980 uye achiramba achinatsurudzwa mumakumi emakore achangopfuura, kupfeka kunoiswa off-line kune pre-yakatemwa girazi mumakamuri emuchina mukati tembiricha yemukati.
Nekuda kweiyo nhoroondo yekushanduka kweaya ekumesa matekinoroji, passive yakaderera-e kupfeka dzimwe nguva inosanganisirwa neiyo pyrolytic maitiro uye yezuva kudzora yakaderera-e kupfeka neMSVD, zvisinei, izvi hazvisisina kunyatsoita. Uye zvakare, mashandiro anosiyana zvakanyanya kubva pachigadzirwa kuenda kuchigadzirwa uye mugadziri kumugadziri (ona tafura pazasi), asi mashandiro edata ematafura anowanikwa nyore uye maturusi mazhinji epamhepo anogona kushandiswa kuenzanisa ese epasi-e kupfeka pamusika.
Mune yakajairwa mbiri mapaneru IG pane ina inogona kuve nzvimbo inokwenenzverwa kupfekedzwa: yekutanga (# 1) kumeso kwakatarisana panze, yechipiri (# 2) uye yechitatu (# 3) nzvimbo dzinotarisana mukati megirazi rinovhara uye akapatsanurwa nedenderedzwa spacer iyo inogadzira inodzivirira mweya nzvimbo, nepo yechina (# 4) kumeso yakatarisana yakananga mumba. Passive yakaderera-e kupfeka inoshanda zvakanyanya kana iri yechitatu kana yechina pamusoro (kure kure nezuva), nepo kudzora kwezuva kwakaderera-e kupfeka kunoshanda zvakanyanya kana iri lite padyo nezuva, kazhinji pechipiri nzvimbo.
Yakadzika-e Kuputira Performance Matanho
Yakadzika-e kupfeka kunoiswa kune akasiyana maficha ekuvharidzira girazi zvikamu. Kunyangwe iyo yakaderera-e yekupfeka inoonekwa seyakaregedza kana kutonga kwezuva, ivo vanopa kuvandudzwa mukuita kwehunhu. Izvi zvinotevera kushandiswa kuyera kushanda kwegirazi ine yakaderera-e kupfeka:
• U-Kukosha ndicho chiyero chinopihwa pahwindo zvichibva nekuti yakawanda sei kupisa kurasikirwa kwarinotendera.
• Inoonekwa Chiedza Transmittance chiyero chekuwanda kwechiedza chinopfuura nepahwindo.
• Solar Heat Gain Coefficient ndicho chidimbu chechiitiko mwaranzi yezuva inobvumidzwa nepahwindo, zvese zvakatapurirana zvakananga uye kupinza & kuburitsazve mukati. Iyo yepazasi iyo hwindo rezuva kupisa kunowana kuenzana, iwo mashoma ezuva kupisa kwaanotumira.
• Chiedza kuSolar Gain chiyero chiri pakati pehwindo reSolar Heat Gain Coefficient (SHGC) uye nemwenje waro unooneka wechiedza (VLT).
Heano maitiro ekupfeka anoyera nekudzora huwandu hweiyo ultra-violet uye infrared mwenje (simba) iyo inogona kupfuura nepagirazi pasina kukanganisa huwandu hwechiedza chinoonekwa chinopfuudzwa.
Paunenge uchifunga nezve mawindo dhizaini: saizi, tint uye humwe hunhu hunhu hunouya mupfungwa. Nekudaro, kupfeka-e kupfeka kunoita basa rakakosha zvakaenzana uye kunokanganisa mashandiro ese ewindo uye iyo yakazara kupisa, mwenje, uye kutonhora kwemutengo wechivako.